Qaar kamid ah Xareesanayaasha Ergooyinka Dooranayay Xubnaha Aqalka Hoose oo isku guursaday magaalooyinkii ay doorashada ka dhacayaan!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Qaar kamid ah Xareesanayaasha Ergooyinka Dooranayay Xubnaha Aqalka Hoose oo isku guursaday magaalooyinkii ay doorashada ka dhacayaan!!
Qaar kamid ah Xareesanayaasha Ergooyinka Dooranayay Xubnaha Aqalka Hoose oo isku guursaday magaalooyinkii ay doorashada ka dhacayaan!!
Doorashada Xubnaha Aqalka hoose ee Baarlamanaka Federaalka Soomaaliya ayaa wali si habsami leh uga socota qaar kamid ah magaalooyinka xarumaha u ah maamul goboleedyada dalka ka jira.
Xildhibaanada Aqalka hoose waxaa dooranayay Ergooyin kala duwan oo laga kala keenay magaalooyin kala gadisan, waxaana ergada isugu jireen wiilal, Gabdho da’yar ah iyo dad da’ ah ayay iskuugu jireen xataa Odayaal iyo Hooyooyin , waxaana intooda badan Ergada lawada dajinayay guryo iyo Hoteelo.
Qaar kamid ah ergada Dooraneysay Xildhibaanada Aqalka hoose ee tagay magaalooyinka Jowhar iyo Cadaado ayaa fursad u helay in ay isbartaan qaarkoodna uu dhax maro shukaansi, waxaana goobahaasi isku bartay dhalinyaro badan oo isku tol ahaa balse aanan aqoon badan isku laheyn markii hore.
Ergooyinka qaarkood ayaa shukaansi kadib waxa ay isku fahmeen in ay is guursadaan gaar ahaan guurka loo yaqaan Qudbo sirada, waxaana magaalooyinka Cadaado iyo Jowhar la isku mehriyay dhalinyaro badan oo Ergada kawada tirsaneed balse is fahan deg deg ah uu dhax maray.
Waxaa sidoo kale jira Ergooyinka qaarkood in shukaansi kooban kadib isku fahmeen in ay is guursadaan marka ay dib ugu laabtaan gurayahdooda iyaga oo Guurkooda u kaashanaya lacagaha ay kasoo heleen Dooasahada Aqalka hoose.
‘’Waxaan marqaati ka noqday dhowr Meher oo ka dhacay magaalada Cadaado, dhalinyaradii aan isla soconay qaarkood ayaaba is fahmay waxa ayna isku mehersadeen magaalada dhaxdeeda, dhalinyarada is mahersatay qaarkood gawarida ayaa lagu dhax mehriyay , Doorashada waxaa laga dhaxlay fursado badan oo guur iyo shaqo abuur ah ’’ Ayuu yiri mid kamid ah Ergooyinkii tagay magaalada Cadaado.
Magaalooyinka Cadaado iyo Jowhar waxaa tagay Ergooyin kumanaan kun ah kuwaa oo halkaasi u tagay in ay soo doortaan Xunaha Aqalka hoose ee Beeshooda ku leedahay Baarlamaanka cusub, waxaana Ergooyinka ugu badan ee is fahanka dhax maray ay ka tageen magaalada Muqdisho.
Previous PostMUUQAAL: C.salaan Hereri oo booqday Xabaalaha in ka badan 50 Soomaaliya ah oo lagu dilay Canada iyo Dood laga qabtay Muuqaal!! Next PostMadaxa Guddiga Xallinta Khilaafaadka ee ku sugan Maamulka Galmudug oo dacwad culus laga gudbiyey Aqriso Warsaxaafadeedka!!